ဘော့စ်နီယားဂျင်နိုဆိုဒ်(၃) | Civil Rights Movement
Aug 14, 2018 | ARTICLES |0|
ဆာဘ်တွေဟာ ဂွင်ရှာနေတာ ကြာပါပြီ။ မထင်မှတ်ဘဲ ဆာဘ်တွေ အတွက် ဂွင်တွေ့သွားစေတာကတော့ ၁၉၉၄ နှစ်လယ်လောက်မှာ ထဖြစ်တဲ့ ရဝမ်ဒါဂျင်နိုဆိုဒ်ပါ။ ၃ လ လောက်အတွင်း လူသိန်းချီ ဖြုတ်ခနဲသတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ ရဝမ်ဒါဂျင်နိုဆိုဒ်မှာ အနောက်နိုင်ငံတွေဟာ ရှက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကို တာဝန်မဲ့ခဲ့ပါတယ်။ ဘလ်ဂျီယန်ကဆိုရင် UN တပ်အဖြစ်စေလွှတ်ထားတဲ့ သူ့စစ်သားတွေကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုကြီးကို မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်တွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်အားတက်ကြွနေသူတွေကတော့ ဆာဘ်ခေါင်းဆောင်တွေပါ။ ဘော့စ်နီးယားနဲ့ ပတ်သတ်ရင်လည်း US အပါအဝင် အနောက်နိုင်ငံတွေဟာ အပြတ်အသတ်စစ်တိုက်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘဲ ဟိုနားနည်းနည်း ဒီနားနည်းနည်းလောက်ပဲ အကန့်အသတ်နဲ့ ကိုင်တွယ်နေတာမို့ ဆာဘ်တွေဘက်က တစ်ခုခုကို ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ပစ်ချင်ရင် လုပ်ပစ်လို့ရတယ်လို့ ဆာဘ်တွေ ဘက်က တွက်ဆမိလိုက်ပါတယ်။
ဆာဘ်တွေရဲ့ တွက်ဆမှုဟာ သွေးထွက်အောင် မှန်ပါတယ်။ ဟာ…သွေးထွက်ရုံလောက်ဘယ်ကမလဲ သွေးပင်လယ်ဝေသည်အထိကို မှန်ပါတော့ တယ်။ ဆာဘ်တွေလက်ချက်နဲ့ သွေးပင်လယ်ဝေသွားတဲ့ နေရာကတော့ ဘော့စ်နီးယားအရှေ့ပိုင်း ဆရက်ဘရက်နီဆာဆိုတဲ့ မြို့လေးပါပဲ။
စစ်မဖြစ်ခင်တုန်းက ဆရက်ဘရက်နီဆာဆိုတဲ့မြို့လေးဟာ တောင်ကြားချိုင့်ဝှမ်းထဲမှာရှိတဲ့ အပန်းဖြေစခန်းမြို့လေးပါ။ မြို့လေးဟာ စိမ်းအုပ်နေတဲ့ သစ်ပင်တွေ အုံ့အုံ့ဆိုင်းဆိုင်း တောင်ပေါ်လေ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် တဖြူးဖြူးနဲ့ အင်မတန်သာယာပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ ကလောလိုမြို့လေးများဖြစ်နေမလား။ ၁၉၉၂ စစ်ပွဲစစချင်း ဒီမြို့လေးဟာ ဆာဘ်တွေရဲ့ သိမ်းပိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ သိပ်မကြာခင် လပိုင်းအတွင်း ဘော့စ်နီးယားတပ်မတော်က တန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်နွှဲပြီး ပြန်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီမှာတင် ဘော့စ်နီးယားအရှေ့ခြမ်းက မွစ်ဆလင်မ်ဒုက္ခသည်တွေဟာ ဆရက်ဘရက်နီဆာမှာ လာရောက်ခိုလှုံနေခဲ့ကြ တာပါ။ (ဒီအကြောင်းတွေ အပိုင်း ၁၀ မှာ ပါပါတယ်။)
၁၉၉၃ ခုနှစ် မှာ ဆာဘ်တွေက မြို့ကိုပြန်သိမ်းခါနီးဆဲဆဲမှာ UN က safe zone ကြေငြာလိုက်လို့ ဆာဘ်ခေါင်းဆောင်တွေဒေါကန်ပြီး မြို့ကို ပိတ်ဆို့ထားတာပါ။ ဝင်တော့ မတိုက်ရဲပါဘူး။ (ဒီအကြောင်း အပိုင်း ၁၉ မှာ ပြန်ကြည့်ပါ။)
ဆရက်ဘရက်နီဆာဟာ ၁၉၉၃ ကနေ ၁၉၉၅ အထိ တောက်လျှောက်ပိတ်ဆို့ခံရပြီး မြို့မှာခိုလှုံနေသူ မွစ်ဆလင်မ် ၄ သောင်းကျော်ဟာ ငတ်တလှည့်ပြတ်တလှည့် ရေမရှိမီးမရှိ နေနေရတာပါ။ သူတို့အတွက် အသတ်မခံရတာကိုပဲ ကံကောင်းလှပြီမဟုတ်လား။
UN ကားတန်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ ရိက္ခာတွေကိုသာ မဝရေစာစားနေရတဲ့ ဆရက်ဘရက်နီဆာခိုလှုံသူတွေကို ငတ်သေအောင် ဆာဘ်တွေက မြို့အဝင်ကားလမ်းတွေမှာ မိုင်းထောင်ပြီး ရိက္ခာပို့မရအောင် လုပ်ထားပါသတဲ့။ ဆရက် ဘရက်နီဆာက ဘော့စ်နီးယန်းတွေကလည်း မခေပါဘူး။ အပေါ့စား လက်နက်တွေကို ပဲ ကိုင်ဆောင်ထားပေမယ့် မြို့ကိုဝိုင်းထားတဲ့ ဆာဘ်တပ်တွေကို လျှို့ဝှက်ဖြတ်ကျော်ကာ မြို့အနီးအပါးက ဆာဘ်တွေနေထိုင်ရာရွာတွေကို ဝင်တိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ တချိန်တုန်းက ဒီရွာတွေဟာ မွစ်ဆလင်မ်တွေရဲ့ ရွာတွေဖြစ်ပြီး အခုတော့ဆာဘ်အလံတလူလူလွှင့်လျက် မောင်ပိုင်စီးခံထားရတာကိုမြင်တဲ့အခါ မွစ်ဆလင်မ်တပ်တွေဟာ နာကျည်းစိတ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘဲ ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။
– ၁၉၉၂ ဇွန်လမှာ Ratkovic ရွာမှာ ဆာဘ်အရပ်သား ၂၀ ကျော်ကို သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့။
– ၁၉၉၃ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက် အော်သိုဒေါက်စ် ခရစ်စမတ်နေ့ကြီးမှာ Kravica ဆိုတဲ့ ဆာဘ်ရွာကိုဝင်တိုက်ပြီး ဆာဘ်စစ်သား၊ အရပ်သား ၄၀၀ လောက်
ကို သတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ပွဲပြီးတော့ ရွာကိုလည်းမီးရှို့ပါတယ်။ မွစ်ဆလင်မ် တွေဘက်က လုပ်ပစ်တာပါ။ ပွဲပြီးတော့ အဲဒီ မွစ်ဆလင်မ်တပ်မှူးလည်း ခုံရုံးတင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အယူခံရုံးမှာ ပြန်လွတ်ပါတယ်။
ဆာဘ်တွေက အဲလိုလာတိုက်တဲ့ မွစ်ဆလင်မ်တွေကို ပြန်လိုက်တိုက် တော့ မွစ်ဆလင်မ်တွေက ဆရက်ဘရက်နီဆာထဲကို ပြန်ပြေးဝင်ပါတယ်။ UN safe zone ထဲဖြစ်နေတော့ ဆာဘ်တွေဘက်က ဆက်မလိုက်ရဲတော့ပါဘူး။ မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ UN တပ်တွေအနေနဲ့ကလည်း ရိက္ခာရချင်လို့ ထွက်တိုက်နေရတဲ့ မွစ်ဆလင်မ်တွေရဲ့ အဖြစ်ကိုစာနာတော့ မတားရက်ပါဘူး။ UN တပ်တွေကိုယ်တိုင် ငတ်တော့မတတ်ဖြစ်နေတာလေ။
စစ်ရပ်ဆဲရေးအတွက် အနောက်နိုင်ငံတွေဘက်က ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးဆာဘ်နဲ့ ဘော့စ်နီးယန်းတွေအကြား ဆွေးနွေးပွဲတွေကို မကြာခဏ လုပ်ပေး လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ဆရက်ဘရက်နီဆာဟာ မပါမဖြစ်ကိစ္စပါ။
အထူးသဖြင့် မြို့ကို လုံးဝပတ်ချာလည်ဝိုင်းထားတဲ့ ဆာဘ်တွေဟာ ဆရက်ဘရက်နီဆာအတွက် ရိက္ခာထောက်ပံ့တဲ့ လမ်းကြောင်းကို အပိတ်အဖွင့် ကစားပြီး ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ အသာစီးယူလေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာ-နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းက နေရာတချို့မှာ ဆာဘ်တပ်တွေပိတ်မိ နေလို့ အပစ်အခတ်ရပ်ချင်ရင် မဆီမဆိုင် ဆရက်ဘရက်နီဆာရဲ့ ရိက္ခာပို့လမ်း ကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ပြီး အပစ်ရပ်ဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးအထိ ဆာဘ်တွေက လုပ်တတ်
ပါတယ်။ အပိတ်ဆို့ခံလူထုကို ဓါးဆာခံလုပ်တဲ့သဘောပါ။ ဘော့စ်နီးယန်းတပ်မှူးတွေဟာ မကြာခဏ ဒီလို လုပ်ခံရတာများတော့ ဆရက်ဘရက်နီဆာကို ထိန်းထားရတာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတခုလို ဖြစ်လာပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်အောင် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတချို့ကလည်း ဆာဘ်တွေပတ်ချာလည် ဝိုင်းထားတဲ့ ဆရက်ဘရက်နီဆာဟာ ဆွေးနွေးပွဲတွေ ရှေ့ဆက်တိုးမရအောင်ဟန့်တားထားတယ်လို့မြင်နေကြတာပါ။
နယ်မြေပိုင်နက်အကြောင်းပြောတာနဲ့ ဆရက်ဘရက်နီဆာဟာ ဖယ်ရှားမရတဲ့ ဆူးတချောင်းသဖွယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ဘော့စ်နီးယားကိစ္စကို ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှု အဖြစ်မမြင်ဘဲ ပြည်တွင်း စစ်အဖြစ်မြင်တာကြောင့် ဆရက်ဘရက်နီဆာ ကျဆုံးသွားရင်လည်း ကောင်းသား ဆိုပြီး ကြိတ်ဆုတောင်းနေကြပါသတဲ့။ ဘော့စ်နီးယားတပ်မတော်ရဲ့ လျစ်လျူရှုမှုနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲက နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ အမြင်မှောက်မှားမှုတွေဟာ ဆာဘ်တွေရဲ့ ဂွင်ရှာမှုနဲ့ ပေါင်းလိုက် တဲ့အခါ ဆရက်ဘရက်နီဆာဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်း ဥရောပမြေမှာ အကြီးမားဆုံး အရပ်သားတွေ အသတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ နေရာဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
ဆာဘ်တွေအနေနဲ့ ၁၉၉၄ ကနေ ၁၉၉၅ အထိ တောက်လျှောက် သွေးတိုးစမ်းမှုတွေ လုပ်နေခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၅ မေလမှာ ဆာဘ်တွေဟာ safe zone တွေကို အမြောက်နဲ့ပစ်လို့ NATO က ဆာဘ်တွေရဲ့ အခြေစိုက် Pale မြို့က စစ်စခန်းတွေနဲ့ ခဲယမ်းသိုလှောင်ရုံတွေကို ဗုံးကြဲပါတယ်။
ဆာဘ်တွေက UN တပ်သား ၃၀၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးပြီး စစ်စခန်းတွေနဲ့ ခဲယမ်းဂိုထောင်တွေမှာ ကြိုးနဲ့ချည်ချုပ်ထားပြီး ဗုံးကြဲတာကို ရပ်ဖို့ အားထုတ် ပါတယ်။ ဆာဘ်တွေအနေနဲ့ ဒီလို မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ လုပ်နေပေမယ့် NATO ဘက်က full-scale မတုံ့ပြန်တဲ့အပေါ် ဆာဘ်တွေဟာ အတင့်ရဲလာပါတယ်။ ဆာဘ်တွေဟာ သူတို့လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ အခြေအနေနဲ့ အချိန် အခါ အားလုံးသင့်လျော်တိုက်ဆိုင်နေပြီလို့ တွက်ဆလိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၉၅ ဇူလိုင် ၁၁ ရက်မှာ…
၁၉၉၅ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၁ မှာ ဆရက်ဘရက်နီဆာကို ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့ ဆာဘ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ UN ရဲ့ ခံစစ်လိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး မြို့ ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက် လိုက်ပါတယ်။ ဆေးအဖြူသုတ်ထားတဲ့ ခံကတုတ်ထဲက UN တပ်သားတွေဟာ အမြောက်တွေ တဒိန်းဒိ်န်းပစ်ပြီးချီတက်လာတဲ့ ဆာဘ်တင့်ကားတွေကို မတားဆီးနိုင်ပါဘူး။ UN တပ်တွေဟာ ဆာဘ်တွေဆီမှာ လက်နက်ချလိုက်ရပြီး သေနတ်ခဲယမ်းလို စစ်သုံးပစ္စည်းသာမက UN တပ်ရဲ့အမှတ်အသား ခမောက်ပြာတွေကိုပါ အပ်နှံလိုက်ရပါတယ်။
ဆရက်ဘရက်နီဆာမှာရှိတဲ့ မွစ်ဆလင်မ်တပ်တွေဟာလည်း safe zone သဘောတူညီချက်အရ လက်နက်တွေကို UN တပ်ဆီ အပ်နှံထားတဲ့အတွက် ဆရက်ဘရက်နီဆာဟာ အလွယ်တကူပဲ ဆာဘ်တွေလက်ထဲကို ရောက်သွား ပါတော့တယ်။ မြို့ကို သိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာ ဆာဘ်တွေဟာ လှည့်စားမှုတချို့ကို လုပ်ပြပါတယ်။ ဆာဘ်ဗိုလ်ချုပ် ရတ်ခိုမလာဒစ်ဟာ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြီးမှာ UN တပ်ခေါင်းဆောင်ကို ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ဖိတ်ခေါ်ပြီး အဖျော်ယမကာအတူတူ သောက်သုံးလျက် ငြိမ်းချမ်းရေးသမားအသွင်ကို ယူပြပါတယ်။
မလာဒစ်နဲ့ UN တပ်မှူးတို့ ယမကာခွက်ကိုယ်စီကိုင်ပြီး အရိုက်ခံလိုက် တဲ့ဓါတ်ပုံဟာ ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့သွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆာဘ်ဗိုလ်ချုပ် မလာဒစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ ဘော့စ်နီးယားအရပ်သားလူအုပ်ထဲကို ဆင်းချသွားပြီး “အေးအေးဆေးဆေးနေချင်တဲ့သူတွေနေလို့ရတယ်။ ထွက်ခွာချင်သူတွေလည်း လွတ်လွတ် လပ်လပ်ထွက်ခွာလို့ရတယ်လို့” သဘောထားကြီးပြလိုက်ပါသေးတယ်။ လူအုပ်ထဲက ခလေးတွေကို ချောကလက်တွေ ကစားစရာတွေပေးရင်း ရုပ်သံအရိုက်ခံလို့ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို လှည့်ဖျားလိုက်ပါသေးတယ်။ ဆာဘ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ ကြာကြာတော့ဟန်မဆောင်နိုင်ပါဘူး။ မြို့ကိုသိမ်းပြီးပြီးချင်း ဆာဘ်ဗိုလ်ချုပ် မလာဒစ်နဲ့ သူ့လက်ထောက်ဗိုလ်ချုပ်ခရစ်တစ်တို့ဟာ “ပုန်ကန်ထကြွနေတဲ့ မွစ်ဆလင်မ်တွေကို လက်စားချေဖို့ အချိန်ရောက်လာပြီလို့” ဆာဘ်ရုပ်သံကနေ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာတော့ ယမကာခွက်ချင်းတေ့နေပုံ ချောကလက်ဝေနေပုံ စတဲ့ ဆာဘ်ဝါဒဖြန့်ရုပ်သံကပဲ ပိုတိုးပေါက်နေပါတယ်။ လက်စား ချေမယ်ဆိုတဲ့ရုပ်သံက လူသိပ်မသိလိုက်ပါဘူး။ မျက်နှာဖုံးကွာကျတဲ့ အဖြစ်ကတော့ ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးနဲ့ခလေးတွေကို ဘက်စ်ကားထဲ ငပိသိပ် ငချဉ်သိပ် ဇွတ်ထိုးထည့်နေလို့ UN တပ်ဖွဲ့တစ်ဦးက မလုပ်သင့်ကြောင်း ပြောမိ တော့ မလာဒစ်က “ဒီမှာ ငါအကြီးဆုံး။ မင်းတို့ခေါင်းနဲ့ကိုယ် အိုးစားမကွဲချင်ရင် ငါ့စကားကိုနားထောင်” လို့ အံကြိတ်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။
UN တပ်တွေဟာ အကျဉ်းသားလုံးလုံးဖြစ်သွားပါပြီ။ ယမကာခွက်ချင်းတေ့ပြတာက လူအမြင်ကောင်းရုံပါ။ ဆာဘ်တွေဟာ ငရဲခန်းနောက်ဆုံး ထပ်ရဲ့တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ ဆာဘ်ငရဲခန်းတွေကို ကြောက်ရွံလို့ထွက်ပြေး
ခဲ့ရပြီး ဆရက်ဘရက်နီဆာမှာ ခိုလှုံခဲ့ကြသူတွေဟာ ဆာဘ်ငရဲသားတွေနဲ့ ထပ်ရင်ဆိုင်ရပြန်ပါပြီ။ သူတို့လွတ်ပါ့မလား ?
ဆရက်ဘရက်နီဆာမှာ ခိုလှုံနေသူ ၄ သောင်းကျော်ဟာ ဆာဘ်တွေရဲ့ ငရဲခန်းတွေကနေ မသေလို့ထွက်ပြေးလာကြသူတွေပါ။ မြို့ကို သိမ်းပြီးတဲ့ မလာဒစ်ဟာဘယ်လိုပဲ သရုပ်ဆောင်နေပါစေ။ သူ့ရဲ့ သရုပ်သကန်အမှန်ကိုသိတဲ့ မွစ်ဆလင်မ်တွေကတော့ ထွက်ပြေးပါတယ်။ ခိုလှုံသူ ၄ သောင်းကျော်အနက် တစ်သောင်းခွဲဟာ မြို့ပတ်ချာလည်မှာရှိတဲ့ သစ်တောတွေဘက်ကို ထွက်ပြေးပါတယ်။ ဆာဘ်တွေဘက်ကလည်းဒီလိုထွက်ပြေးမယ်ဆိုတာကိုသိပြီးသားပါ။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ဟာ သစ်တောထဲမှာမိုင်းတွေကြိုထောင်ထားပါတယ်။ တိုက်ကင်းလှည့်ကင်းတွေနဲ့ အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
ဆရက်ဘရက်နီဆာက ထွက်ပြေးလာသူ တစ်သောင်းခွဲဟာ ဆာဘ်တွေရဲ့မိုင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရှေ့နောက်တန်းစီပြီး ဖြည်း ဖြည်းချင်းသွားရပါတယ်။ လူတစ်သောင်းကျော်တဲ့ လူတန်းကြီးဟာ သစ်တောကိုဖြတ်ပြီးတရွေ့ရွေ့နဲ့ ခရီးနှင်ကြရှာတာပါ။ လူတန်းရဲ့ရှေ့ဆုံးကပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မိုင်း ရှာကိရိယာအဖြစ် ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုယ်သုံးရတဲ့အဖြစ်ပါ။ အဲဒီလူသေရင်လဲ နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်က ရှေ့တက်ပြီးအသေခံတိုးပေါ့။
ဒီလူတန်းကြီးဟာ ဆာဘ်တွေရဲ့တိုက်ကင်းလှည့်ကင်းတွေကိုရှောင်ရှားရင်း မိုင်းမမိပါစေကြောင်းဆုတောင်းရင်း ချီတက်ရပါတယ်။ ဆာဘ်အမြောက်တွေကလည်း သစ်တောထဲက ထွက်ပြေးတဲ့လူတွေရှိရာကို မှန်းဆပြီး အမြောက်ဆန်တွေ ပစ်သွင်းပါသေးတယ်။ ထွက်ပြေးတဲ့သူတွေထဲက တချို့ကောင်မလေးတွေဟာ ဆာဘ်တွေရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကိုရှောင်ရှားဖို့ ကိုယ့်ဖာသာသတ်သေသွားကြပါတယ်။ ဒီမိန်းခလေးတွေကြောက်တာက ဖမ်းပီးသတ်ပစ်မှာထက် မသတ်ခင်မုဒိန်းကျင့်မှာကိုပါ။
မိုင် ၄၀ ကျော်တဲ့သစ်တောကိုဖြတ်ပြေးကြသူတွေဟာ ရင်တထိတ် ထိတ်နဲ့ စိုးရိမ်နေရသလောက် ဆရက်ဘရက်နီဆာမြို့ထဲမှာကျန်ရစ်နေသူ ၃ သောင်းနီးပါးဟာတော့ သေရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကို ဒုန်းဒုန်းချလို့ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဆာဘ်တွေဟာ ဆရက်ဘရက်နီဆာ မြို့ထဲမှာ ကျန်ရစ်သူတွေထဲက အရွယ်ရောက်ယောက်ျားတွေကို ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသားတယောက်ဟာ သူ့သားလေးကို အနီးအနားမှာရှိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်လက်ထဲကို ထိုးထည့်လိုက်ပြီး “သားလေးကို စောင့်ရှောက်ပေးပါဗျာ။ ကျွန်တော့်ကို ဆာဘ်တွေက ဟိုဟာလုပ်တော့မှာဗျ” လည်ပင်းကို လက်နဲ့လှီးဟန်လုပ်ပြပြီး ဆာဘ်တွေခေါ်ရာ လိုက်သွားရပါတယ်။ ဒီသားအဖဟာ တသက်တာ ပြန်လည်တွေ့ဆုံဖို့မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီနောက်မှာတော့ ဆာဘ်တွေဟာ ယောက်ျားလေးအကျဉ်းသားတွေကို လူမနေတဲ့ကွင်းပြင်တွေဘက်ကို ချီတက်ခိုင်းပါတယ်။ ဆာဘ်တွေရဲ့ လူသတ်ပွဲကျင်းပရာကွင်းပြင်တွေပေါ့။ ကွင်းပြင်တွေထဲမှာ အသင့်စောင့် နေတာကတော့ မြေကျင်းတွေပါ။
အဲဒီကွင်းပြင်တွေမှာ ဘော့စ်နီးယန်းမွစ်ဆလင်မ်ယောက်ျား အနည်းဆုံး ၈ ထောင်ကျော် သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ တစ်ပတ်အတွင်းလူ အနည်းဆုံး လူ ၈ ထောင် အသတ်ခံလိုက်ရတာပါ။ (အခုထိအလောင်းတွေ အရိုးစုတွေ ရှာဖွေတွေ့ရှိနေဆဲမို့ အသတ်ခံရသူတွေဟာ ၁သောင်းခွဲကျော်နေပါပြီ။) ဒါဆို ကျန်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးတွေရောသက်သာရဲ့လားဆိုတော့….။
ငပိသိပ်ငချဉ်သိပ်ထည့်ထားတဲ့ ဘက်စ်ကားတွေထဲမှာ ပြွတ်သိပ်ထည့် ထားတဲ့ မိန်းမနဲ့ခလေးတွေဟာ တူဇ်လာမြို့ဆီကို ထွက်ခွာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဘက်စ် ကားမှန်တွေကတဆင့် လှမ်းမြင်နေရတာကတော့ မဆုံးနိုင်တဲ့ လူတန်းကြီးပါ။ ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ မောင်ဘွား၊ အကို၊ ယောက်ျား၊ ဖခင်တွေဟာ မပြန်လမ်းကို သွားဖို့ ချီတက်နေကြရတာပါ။ အဲဒီလူတန်းကြီးကို မျက်ရည်လည်ရွှဲပြီး ကြည့်နေတဲ့ ဘော့စ်နီးယန်းအမျိုးသမီးဟာ ဘက်စ်ကားပေါ်ကနေ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆွဲချခံလိုက်ရပြီး ဆာဘ်စစ်သားလေးငါး ယောက်ပါတဲ့အုပ်စုရဲ့ မုဒ်ိန်းကျင့်ခြင်းကို ခံရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ဘာမှမဖြစ်သလို ဖုတ်ဖတ်ခါထလို့ဘက်စ်ကားပေါ်ကို ပြန်တက်ရပါတယ်။
မုဒိန်းကျင့်တာကို ရုန်းကန်ဆန့်ကျင်တဲ့၊ အော်ဟစ်တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ နေရာမှာတင်ပစ်သတ်ခံရပါတယ်။ လမ်းခရီးတလျှောက်မှာလည်း ရုပ်ရည်လှပတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဘက်စ်ကားပေါ်ကနေ မကြာခနဆွဲချခံရပြီး မုဒိန်းကျင့်ခံရပါတယ်။ လမ်းဘေးဝဲယာတလျှောက်မှာ သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ အလောင်းတွေ မီးလောင်ပြင်ဖြစ်နေတဲ့ရွာတွေကို မကြာခဏမြင်နေရပါတယ်။ ဘော့စ်နီးယန်းအမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီလို ငရဲခရီးကို အောင့်အီးဖြတ်သန်းရင်းနဲ့ တူဇ်လာကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ သူတို့ရဲ့ နောက်မှာတော့ ဘယ်တော့မှ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ ဘဝတွေ၊ အသက်တွေ၊ အရှက်တွေ၊ သိက္ခာတွေ၊ မိသားစုတွေဟာ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ပြိုကွဲပြန့်ကျဲလျက် ရှိနေပါတော့တယ်။
ဆရက်ဘရက်နီဆာဆိုတဲ့မြို့ကို ဆာဘ်တွေသိမ်းလိုက်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ဆရက်ဘရက်နီဆာဆိုတာ သာမန်မြို့မဟုတ်ဘူး။ UN က safe zone ကြေငြာထားတဲ့မြို့။ ဝင်အတိုက်ခံရရင် NATO က လေကြောင်းပစ်ကူပေးပါမယ်လို့ ကတိ ခံထားတဲ့မြို့။ အခု အဲဒီမြို့ကို ဆာဘ်တွေက သိမ်းလိုက်ပြီ။ မြို့ထဲမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ UN တပ်တွေကိုလည်း ဆာဘ်တွေက ဖမ်းထားလိုက်ပြီ။ မြို့ထဲမှာ ခိုလှုံနေတဲ့ မွစ်ဆလင်မ်အရပ်သားတွေရဲ့ ကံတရားက ဘယ်လိုလဲ။ စသဖြင့် စိုးရိမ်တကြီးသံတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
UN အရပ်သားခေါင်းဆောင် ယာဆူရှီအာ့ခါရှီဟာ ဆရက်ဘရက်နီဆာကိစ္စကို အစီရင်ခံစာရေးတင်ပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာဟာ ဆရက်ဘရက်နီဆာ ကျဆုံးပြီး ၃ ရက်မြောက်နေ့မှာ ရေးတဲ့စာပါ။ ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာ UN တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အဖမ်းခံထားရကြောင်းကိုပဲ အဓိကရေးထားပြီ။ မွစ်ဆလင်မ်ယောက်ျား ထောင်ချီ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းကို သာမန်ကာလျှံကာပဲ ရေးထားပါတယ်။ ဒီပျောက်ဆုံးသွားသူတွေဟာအသတ်ဖြတ်ခံရကြောင်းထည့်ရေးတာမျိုး လုံးဝမရှိပါဘူး။
ပိုဆိုးတာက အာ့ခါရှီဟာ ဆရက်ဘရက်နီဆာ ကျဆုံးရခြင်းဟာ အဲဒီမြို့ထဲက မွစ်ဆလင်မ်တွေက အနေအထိုင်မတတ်ဘဲ ဆာဘ်တွေကို မကြာခဏ ရန်စတိုက်ခိုက်လို့ပဲဆိုပြီး Victim Blaming လုပ်တာပါ။ဆရက်ဘရက်နီဆာကျဆုံးပြီးပြီးချင်း ချက်ချင်းပြန်သိမ်းဖို့ ပြောလာသူကတော့ ပြင်သစ်သမ္မတ ဂျက်ရှီးရခ်ပါ။ သူပြောတာက ပြင်သစ်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေကို အမေရိကန်ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့သယ်ဆောင်ပြီး ဆရက်ဘရက်နီဆာကို ပြန်တိုက်သိမ်းဖို့ပါ။ ဒီအတွက် ပြင်သစ်သမ္မတက ကလင်တန်ဆီဖုန်းဆက်မေး တော့ ကလင်တန်က “အမေရိကန်အနေနဲ့ တဖက်ဖက်ကနေ ဝင်တိုက်ပေးဖို့ထက် မျှခြေတစ်ခုကိုပဲ ထိန်းထားလိုတယ်” ဆိုတဲ့သဘောပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်တည်ပြီး action တစ်ခုခုလုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့အဖြေပါ။
“ဆရက်ဘရက်နီဆာကို ဆာဘ်တွေသိမ်းတာဟာ အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေးအတွက် ဆာဘ်တွေဘက်က နယ်မြေပိုင်နက်ကိစ္စရှင်းအောင် ဆောင်ရွက်တာ မျိုးပဲ” လို US အစိုးရက ယူဆထားပါတယ်။၁၉၉၂ ခုနှစ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့မြို့ပြ ethnic cleansing မျိုး ဆာဘ်တွေ ထပ်မလုပ်လောက်ပါဘူး။ ဒီကြားကာလမှာ NATO က ဆာဘ်တွေကို ပုံစံပေးဆုံးမထားလိုက်နိုင်တယ်လို့ US အစိုးရကတွက်ဆ ထားလိုက်တာပါ။ ဆာဘ်တွေကတော့ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ်ဆိုတဲ့အတိုင်း လုပ်စရာရှိတာတွေကို တစ်ပတ်အတွင်း အပြီးလုပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ တစ်ပတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ ဝေဝါးမှု၊ မှိုင်တွေမှု၊ လိုရာဆွဲ တွေးခေါ်မှုတွေနဲ့ ချီတုံချတုံဖြစ်နေခဲ့ပြီး ဆာဘ်တွေဟာ ဒီအနေအထားကို အပြည့်အဝ အမြတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘော့စ်နီးယားဝန်ကြီးချုပ် ဆလာဂ်ျက ဆရက်ဘရက်နီဆာ အတိုက်ခံရကြောင်းမျက်လုံးပြူးမျက်ဆုံပြူးပြီးအော်တဲ့အခါမှာလည်း US အပါအဝင် အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေက “မင်းတို့ဘော့စ်နီးယန်းတွေဟာ အားတိုင်းဒီလိုချည်း ကျားလာပြီ ကျားလာပြီ” လို့ ထထ အော်နေကျပဲဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးသာ တုန့်ပြန်ကြပါတယ်။ “ဆရက်ဘရက်နီဆာsafe zone ဆိုတာ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။ အဲဒီမှာ UN အဖွဲ့ရဲ့ သိက္ခာဆိုတာရှိတယ်။ ကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ကတိဆိုတာရှိတယ်။ ဒီဟာတွေအားလုံးကို ချိုးဖျက်ပြီး ဆာဘ်တွေကို လုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်ပေးနေပါသလား” ဆိုပြီးထောက်ပြတဲ့သူကတော့ UN ဆိုင်ရာ ဘော့စ်နီးယား သံအမတ်ကြီး ဆာကာဘီပါ။
နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေရဲ့ ဒီထောက်ပြချက်တွေအပေါ် တုန့်ပြန်မှုကခပ်တိုးတိုးချလိုက်တဲ့ သက်ပြင်းသံတွေပါပဲ။ US အစိုးရကို ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်လာဖို့ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်မဲ့ ဖိုက်တာကြီးတွေ လိုအပ်နေပါပြီ။
ဒီမအေ –ိုးတွေကို ဗုံးကြဲလိုက်ရင်
ဆရက်ဘရက်နီဆာ ကျပြီးနောက်တရက် ၁၉၉၅ ဇူလိုင် ၁၂ မှာ US နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ “ဆာဘ်တွေဟာဖမ်းဆီးထားတဲ့ မွစ်ဆလင်မ်ယောက်ျားအကျဉ်းသားတွေအပေါ် ကောင်းကောင်း
မွန်မွန် မဆက်ဆံမှာ စိုးရိမ်မိတယ်” လို့ထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်။ တကယ်တော့ သူ့အနေနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ မွစ်ဆလင်မ် အကျဉ်းသားတွေဟာ မြေကျင်းတွေထဲမှာငြိမ်းချမ်းစွာစတင် လှဲလျောင်းနေကြပါပြီ။ မွစ်ဆလင်မ်အကျဉ်းသားတွေ အားလုံးနီးပါးဟာ အဖမ်းခံနေရတာမဟုတ်ဘဲ အသတ်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်းကို ရိပ်မိသူ၊ ရိပ်မိသိရှိသလောက်စိုးရိမ်ပူပန်သူ၊ စိုးရိမ်ပူပန်သလောက် အလုပ်လုပ်သူ US အစိုးရပိုင်းမှာ သိပ်မရှိလှပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဆာဘ်တွေရဲ့ ရက်စက်မှုတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဟိုးလ်ဘရုခ်ကတော့ ဆရက်ဘရက်နီဆာမှာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်တာတွေဖြစ်နေပြီလို့ တန်းပြောပါတယ်။ ဆရက်ဘရက်နီဆာကျဆုံးသွားကြောင်းသတင်းကို ကြားကြားချင်း ဟိုးလ်ဘရုခ်က ဒေါတတွေ တဆတ်ဆတ်ထွက်နေပါတယ်။
သူ့အနေနဲ့ ပေါက်ကွဲပြီးတော့ “အစကတည်းက ဒီမအေ-ိုးတွေကို ဗုံးကြဲပစ်ခဲ့ရင် ဒါမျိုးသတ်တာဖြတ်တာတွေဖြစ်လာမှာကို မဟုတ်ဘူး”လို့ အစည်း အဝေးမှာ ထပြောတဲ့အထိကိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ ခံစားချက်သပ်သပ်နဲ့တင် အလုပ်လုပ်လို့မရမှန်း ဟိုးလ်ဘရုခ်သိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အကျဉ်းသားတွေဟာ သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရကြောင်း အထောက်အထားတွေ ပြရမှာပါ။ ဒီလိုအထောက်အထားတွေရဖို့ ဟိုးလ်ဘရုခ်လှမ်းချိတ်လိုက်တဲ့ သူ ကတော့ ပီတာဂါးဘရသ်ပါ။
အီရတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကာဒ်ဂျင်နိုဆိုဒ်နဲ့ ဘော့စ်နီးယားဖြစ်စဉ်အစပိုင်းက ဆာဘ်ငရဲခန်းတွေကို လက်တွေ့မျက်မြင်သိရှိသူ ဂါးဘရသ်ကလည်း ဟိုးလ်ဘရုခ်လိုပဲ ဆရက်ဘရက်နီဆာက မွစ်ဆလင်မ်အကျဉ်းသားတွေအားလုံး သတ်ဖြတ်ခံ လိုက်ရပြီလို့ ယူဆပါတယ်။ ဂါးဘရသ်ရဲ့ရည်းစားဟာ တူဇ်လာမှာ UN အရာရှိ တယောက်အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာပါ။ တူဇ်လာကို ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ ယောက်ျားသားတွေ တစ်ယောက်မှ ပါမလာတော့ပါဘူး။ အားလုံးမိန်းမနဲ့ ကလေးတွေချည့်ပါပဲ။ အခြေအနေဟာ တအားကိုထူးခြားနေပါပြီ။
ဒီအချိန်ထိ US အစိုးရဘက်က တုန့်ပြန်မှုက
– ထွက်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီတွေပေးတာ။
– အဖမ်းဆီးခံ UN တပ်ဖွဲ့တွေလွတ်မြောက်ဖို့ ဆာဘ်တွေကို ဖိအားပေး တာလောက်ပါပဲ။
– အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ မွစ်ဆလင်မ်ယောက်ျားအကျဉ်းသားတွေကိစ္စကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီအဖွဲ့ (ICRC) ကိုပဲ တာဝန်လွှဲပေးထားလိုက်ပါတယ်။
ဆာဘ်တွေဘက်က ICRC ကိုအဝင်မခံဘဲ ပိတ်ထားလိုက်တော့ အဖမ်းဆီးခံ အကျဉ်းသား တွေရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ သို့လော သို့လောဖြစ်နေပါတယ်။ သို့လောသို့လောနဲ့ အချိန်ကုန်ခံလို့မရ မှန်းသိတဲ့ ဂါးဘရသ်ဟာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ခရစ္စတိုဖာနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို စီစဉ်ပေးသူကတော့ ဟိုးလ်ဘရုခ်ပါ။ မကြာခဏ လက်ရဲဇက်ရဲနဲ့ ဘောင်ကျော်လုပ်တတ်တဲ့ ဂါးဘရသ်ကိုခရစ္စတိုဖာက ကြည့်မရတာအတော်ကြာပါပြီ။ ဂါးဘရသ်ကလည်း ဝန်ကြီးနဲ့သိပ်အစေးမကပ်လှပါဘူး။ ဒီကိစ္စမှာတော့ ရှေ့မျက်နှာ ရှေ့ထားပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရပါတယ်။ ဂါးဘရသ် အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့ ဆရက်ဘရက်နီဆာက အသတ်ဖြတ်ခံအကျဉ်းသားတွေ အကြောင်းနဲ့ ဆာဘ်တွေဟာ ဇပ်ပါ safe zone ကိုပါ စတင်တိုက်ခိုက်နေပြီမို့ လေကြောင်းပစ်ကူ အမြန်ဆုံးပေးဖို့ပါ။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ စကားပြောရတာဟာ ဂါးဘရသ်အဖို့ အုတ်နံရံကိုခေါင်းနဲ့တိုက်သလိုသာဖြစ်နေတာပါ။ ဒီအုတ်နံရံကြီးကိုဖြိုပစ်ဖို့ ဂါးဘရသ်ခေါင်း လောက်နဲ့ ဝင်ဆောင့်လို့ဘယ်ရမလဲ။ တကယ့်ဆင်အကြီးကြီးတကောင်ရဲ့ အားနဲ့မှ ဖြိုလို့ရမှာပေါ့။အုတ်နံရံကိုဖြိုပေးမယ့် ဆင်အကြီးကြီး ရှိပါ့မလား…?
သူကတော့ US ဒုတိယသမ္မတ အလ်ဂိုးပါ။ ဂါးဘရသ်နဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲအပြီး နောက်ရက်မှာဆက်ကျင်းပတဲ့ US အစိုးရဝန်ကြီးများဆွေးနွေးပွဲမှာ ဒုတိယသမ္မတအလ်ဂိုးဟာ ဘော့စ်နီးယားဖြစ်စဉ်ဟာ genocide ရာဇဝတ်မှုပဲလို့ အစချီပြီး စကားပြောပါတယ်။ နောက်ထပ်သတ်ဖြတ် ပွဲတွေကိုခွင့်ပြုထားရင်း ဒုက္ခသည်အရေအတွက်တိုးလာတာကို ငုပ်တုတ်ထိုင်ကြည့်ရင်း ရေစုံမျောလိုက်လို့မရကြောင်း အဓိကပြောသွားတာပါ။
ဆွေးနွေးပွဲမှာ အလ်ဂိုးသုံးသွားတဲ့ ဓါတ်ပုံကတော့ ဆာဘ်မုဒ်ိန်းရန်ကို ကြောက်လို့ ကိုယ့်ဖာသာ ဆွဲကြိုးချသတ်သေသွားတဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ပုံပါ။ ဒီပုံကိုပြရင်းနဲ့ အလ်ဂိုးပြောသွားတာက “ကျွန်တော့်သမီးလေးကသာ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးမေးမြန်းလာခဲ့လို့ရှိရင် ဖေဖေတို့ ဘာမှမလုပ်ဘဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေ ခဲ့ကြတယ်လို့ ဖြေကြမှာလား” ဆိုတဲ့ စကားမျိုးပါ။ အားလုံးရဲ့ရင်ထဲကို ထိထိ ခိုက်ခိုက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်။
မြေပြင်က ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာလည်း လူသက်သေတချို့ ပေါ်ပေါက် လာပါတယ်။ တူဇ်လာခရီးစဉ်တလျှောက် မြင်ခဲ့ရတာတွေကို သက်သေထွက်ဆို ပေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာသလို သစ်တောကိုဖြတ်ပြီး လက်ချင်းချိတ်လို့ ထွက်ပြေးခဲ့သူတွေထဲက အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ အများအပြားလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။လူသောင်းချီ သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့အထဲကမှ ရှားရှားပါပါး တစ်ယောက်စနှစ်ယောက်စ လွတ်လာသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဥပမာ-ဆာဘ်တွေဟာ အကျဉ်းသားတွေကို ဘရက်တူညက်မြို့ကို ချီတက်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီမြို့ကိုရောက်တော့အကျဉ်းသားတွေကို အယောက် ၂၀ စီ ဘောလုံးကွင်းဘက်ကို ခေါ်ထုတ်သွား ပါတယ်။ ဘောလုံးကွင်းထဲမှာတော့ ရှေ့မှာသတ်ထားတဲ့အလောင်းတွေ ပုံအောနေပါတယ်။ လွတ်မြောက်လာသူဟာ သေနတ်သံစကြားရတာနဲ့ အလောင်းပုံထဲ လှဲချခဲ့လိုက်တာပါ။
ဆာဘ်တွေဟာ နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတွေကို သွားခေါ်နေတုန်း သူဟာ အလောင်းတွေအောက်အထိ တိုးသွားပြီး ပုန်းနေလိုက်ပါတယ်။ မှောင်တော့မှ အလောင်းတွေအောက်ကတိုးထွက်ပြီး ထွက်ပြေးလာခဲ့တာပါ။ ရှားရှား ပါးပါး ဒီလိုထွက်ပြေးလာနိုင်သူ ၃ ယောက်သာရှိပါတယ်။ ဆာဘ်တွေကတော့ နောက်ရက်မှာ ဘူဒိုဇာတွေနဲ့ထိုးပြီး အလောင်းတွေကိုမြေကျင်းထဲမှာ မြုပ်နှံပစ်ပါတယ်။ CIA ရဲ့ မိုင်တစ်ရာပတ်လည်ကို တစ်ချက် ရိုက်တဲ့ ဂြိုဟ်တုဓါတ်ပုံမှာတော့ ဘူဒိုဇာတွေ လှုပ်ရှားနေတာကို မြင်နေရရုံမက ဘူဒိုဇာဘီးရာကိုပါ မြင်ရပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ထွက်ဆိုချက်နဲ့ ဂြိုဟ်တု ဓါတ်ပုံတွေ ကိုက်ညီချက်ကိုယှဉ်တွဲပြီး CIA က အစီရင်ခံစာတင်ပါတယ်။
ဒီဂြိုဟ်ဓါတ်ပုံတွေ အထောက်အထားတွေကိုပြပြီး ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ တင်ပြဆွေးနွေးသူကတော့ မယ်ဒလင်းအောလ်ဘရိုက်ပါ။ ဒီအန်တီကြီးဟာ လည်း ဆာဘ်တွေကို ဗုံးကြဲပစ်ချင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါပဲ။
ဆရက်ဘရက်နီဆာကျပြီး တစ်ပတ်အကြာမှာ US လူ့အခွင့်အရေးလက်ထောက်ညွှန်မှူးဟာ အစီရင်ခံစာတစ်စောင် တင်သွင်းပါတယ်။ အစီရင်ခံစာမှာ ဆရက်ဘရက်နီဆာ သတ်ဖြတ်မှုတွေရဲ့ လူသက်သေထွက်ဆိုချက်တွေအပြင် နောက်ထပ်အတိုက်ခံနေရတဲ့ ဇပ်ပါ safe zone ကိုကာကွယ်ဖို့ ဆာဘ်တွေကိုဗုံးကြဲသင့်ကြောင်းပါ ထည့်ရေးထားတာပါ။
အစီရင်ခံစာရဲ့ အဓိကထောက်ပြချက်ကတော့ UN safe zone တွေကျဆုံးသွားရင် နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ UN တပ်တွေဆုတ်ခွာသွားရပါလိမ့်မယ်။ UN တပ်တွေဆုတ်ခွာမှုရှိလာရင် US အနေနဲ့ကူညီပါ့မယ်လို့ ကလင်တန်ကလူသိရှင်ကြား ကြေငြာထားတာရှိပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် US မြေပြင်တပ်တွေ ဝင်လာ ရသည်အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ US စစ်သားတွေ အထိအခိုက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်မှီတုန်း ဆာဘ်တွေကို ဗုံးကြဲပါလို့ အစီရင်ခံစာမှာ ရေးထားပါတယ်။
US က ဆင်အကြီးကြီးတွေ ဝိုင်းတွန်းနေတာမို့အခြေအနေတွေကောင်းမွန်လာ လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နိုင်ပြီလား….?
ဆာဘ်တွေဟာ ဆရက်ဘရက်နီဆာကို ဝင်တိုက်တော့ မြို့ထဲမှာ ခိုလှုံနေသူတွေဟာ UN နဲ့ အနောက်ကမ္ဘာက တို့ကိုပစ်မထားလောက်ပါဘူးလို့ အပိုင်တွက်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့ဆိုထွက်ပြေးတာတောင် အိမ်ကိုသော့ခတ်ထားပြီး သော့ချောင်းကိုပဲယူလာခဲ့ပါတယ်။ UN တပ်တွေမြို့ကိုပြန်သိမ်းရင် ကိုယ့်အိမ်ထဲအလွယ်တကူ ပြန်ဝင်လို့ရအောင်လေ။ လက်တွေ့မှာတော့ ခေါင်းနဲ့ကိုယ် အိုးစားကွဲအောင် အသတ်ခံလိုက်ရတာပဲကြုံခဲ့ရတော့ ဘော့စ်နီးယန်းတွေဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံကြည်တော့ပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် ဘော့စ်နီးယန်းတွေဟာ ဇပ်ပါကို လာတိုက်တဲ့ ဆာဘ်တွေကို ခံတိုက်ပါတယ်။ ဆရက်ဘရက်နီဆာတုန်းက ဘော့စ်နီးယန်းတပ်မတော်ဟာ လက်နက်တွေကို UN ဆီအပ်ထားမိလို့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ဇပ်ပါမှာတော့ ကိုယ့်လက်ကိုယ့်ခြေ ကိုယ့်လက်နက်နဲ့ ရန်သူတွေကို ပြန်ခံတိုက်ပါတယ်။ (ဇပ်ပါမှာUN တပ်သား ၈၀ ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်။) ဇပ်ပါမှာ ခံစစ်ဆင်တဲ့ မွစ်ဆလင်မ်တွေရဲ့အားသာချက်က မြို့ဟာ တောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိနေတာပါ။ (ဆရက်ဘရက်နီဆာဟာ တောင်ကြားထဲမှာ ရှိလို့ခံစစ်ပိုင်းအားနည်းပါတယ်။)
မိန်းမတွေမုဒိန်းကျင့်ခံရပြီး ကလေးတွေ တုန်လှုပ်ချောက်ချားပြီး ယောက်ျားတွေအားလုံး သိုးတွေလိုအသတ်ခံရမယ့်အစား ဇပ်ပါက မွစ်ဆလင်မ်တပ်မှူးဟာ အသေခံတိုက်ဖို့ပဲ ရွေးလိုက်ပါတယ်။ NATO ရဲ့ လေကြောင်းပစ်ကူမရတာတောင် အပေါ့စားလက်နက်တွေသာတပ်ဆင်ထားတဲ့ မွစ်ဆလင်မ်တပ်တွေဟာ တင့်ကားနဲ့လက်နက်ကြီးပါတဲ့ဆာဘ်တွေကို ကျားကုပ်ကျားခဲခုခံကြပါတယ်။ အင်အားချင်း မမျှတဲ့အတွက် နှစ်ပတ်အကြာမှာ ဇပ်ပါဟာ ဆာဘ်တွေလက်ထဲကျသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုခံမှုဟာ အလဟဿတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ထောင်ပေါင်းများ စွာသော အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ခလေးတွေဟာ ဆာရာယေဗိုကို ရွှေ့ပြောင်းချိန် ရခဲ့ကြပါတယ်။ အရပ်သားတွေ ရွှေ့ပြောင်းပြီးချိန်မှာတော့ ဇပ်ပါခုခံရေးတပ်ဖွဲ့ဟာ အဖွဲ့ငယ်လေးတွေအဖြစ် ဖြန့်ခွဲပြီး ဗျူဟာမြောက်ခွာစစ်ဆင်ကြပါတယ်။
သူ့လက်အောက်ငယ်သားတွေ ဒီလို ခွာစစ်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် ဇပ်ပါက မွစ်ဆလင်မ်တပ်မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး Avdo Palic ဟာ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ရန်သူကိုဟန့်စစ်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။ ရဲဘော်တွေ အားလုံးနီးပါး ဘေးလွတ်ရာကို ဆုတ်ခွာသွားချိန်မှာတော့ ဟန်စစ်ဆင်ပေးနေတဲ့ မွစ်ဆလင်မ်တပ်မှူးဟာ UN ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ စေ့စပ်ပေးမှုကြောင့် ဆာဘ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောစဉ်မှာ ဆာဘ်တွေက ကတိဖျက်ပြီး ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းကစပြီး ဗိုလ်မှူးကြီး Avdo Palic ဘာဖြစ်သွားလဲ ဘယ်သူမှမသိကြတော့ပါဘူး။ စစ်ပွဲပြီးလို့ ဒီကိစ္စကို ပြန်စစ်ဆေးတော့မှ ဆာဘ်တွေဟာ သူတို့ကို သတ္တိပြောင်ပြောင်နဲ့ ခံတိုက်တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်ကြောင်း ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ (ဒီကိစ္စကို စစ်ပွဲအပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်မှ သိရတာပါ။)
ဇပ်ပါ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန် ၁၉၉၅ ဇူလိုင် ၂၁ မှာ US နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေဟာ လန်ဒန်မှာ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးထိုင်ပါတယ်။ အစည်းအဝေး အပြီးမှာ လန်ဒန်ကြေငြာချက် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ကြေငြာချက်မှာ ဂိုရက်ဇ် safe zone ကို ဆာဘ်တွေက တိုက်ခိုက်လာရင် NATO က အကန့်အသတ်မရှိ ဗုံးကြဲတော့မှာဖြစ်ကြောင်း ပါလာပါတယ်။
အားလုံးအံ့အားသင့်သွားပါတယ်။ ကျဆုံးသွားတဲ့ ဆရက်ဘရက်နီဆာ အကြောင်း တလုံးမှမပါ၊ လောလောဆယ် ကျတော့မတတ်ဖြစ်နေတဲ့ ဇပ်ပါ safe zone အကြောင်း တစ်လုံးမှမပါတဲ့ ဒီကြေငြာချက်ဟာ အတော်ကို စိတ်ပျက်စရာပါ။ ဘော့စ်နီးယန်းမွစ်ဆလင်မ်တွေအနေနဲ့ ဇပ်ပါမှာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီးခုခံဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တာ မှန်သွားပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တွေဟာ မယုံကြည်ရသူတွေလား…?
တကယ်တော့ အနောက်နိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တွေဟာ သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်သွားတာပါ။ သူတို့ကို ဘော့စ်နီးယားတွေရဲ့အရေးမှာ ကိုယ့်ကိစ္စလို လုပ်လာစေဖို့ အပိုင်ချည်ရမှာပါ။ ဒီလို အပိုင်ချည်ပီး US အစိုးရကို ဇပ်ကြိုးခွံ့မယ့်
သူကတော့ . . .
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း အီတလီစစ်မျက်နှာတစ်နေရာ ရန်သူ့လက်နက်ကြီးမှန်လို့ သတ်ကွင်းထဲမှာ တလူးလူးတလိမ့်လိမ့်ဖြစ်နေတဲ့ ရဲဘော်လေးကို တက်ဆွဲရင်းနဲ့ စစ်ဗိုလ်ပေါက်စ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ ဂျာမန်စက်လက်နဲ့ အမွှေ့ခံ
လိုက်ရပြီး သေကောင်ပေါင်းလဲနဲ့ စစ်မြေပြင်ရှေ့တန်းဆေးရုံကို ရောက်လာပါတယ်။
ဘော့ပ်ဒိုးလ် နဖူးမှာ M ဆိုတဲ့ အမှတ်အသားကို သွေးနဲ့ရေးထားပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ဒီလူဟာသေတော့မှာ။ ဒါ့ကြောင့် morphine သာနိုင်နိုင်ပေးကြဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ မသေဘဲ ပတ်တီးအဖွေးသားနဲ့ US မြေကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။ US ကိုပြန်ရောက်တော့လဲ ရထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာ အနာမကျက်တဲ့အပြင် အနာတွေထဲ ပိုးဝင်ပြည်လိုက်ပြီး သွေးဆိပ်တက်လိုက်ပါသေးတယ်။ အာမေးနီးယန်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်တယောက်က ကုသပေးလိုက်လို့ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ နေပြန်ကောင်းလာပေမယ့် သူ့ညာဘက်လက်ကတော့ သုံးမရတော့ပါဘူး။ အာမေးနီးယန်းဆရာဝန်ရဲ့ ကုသပေးမှုနဲ့ ကူညီမှုတွေအပြင် ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ အာမေးနီးယန်းဂျင်နိုဆိုဒ်အကြောင်းပါ သိခဲ့ရပါတယ်။ သူစစ်မြေပြင်မှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ဂျာမန်တွေဟာလည်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေဖြစ်ကြောင်း ဘော့ပ်ဒိုးလ်သိခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
အဲဒီ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ ရီဗက်ပလစ်ကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ် လာချိန်မှာတော့ ဆာဘ်တွေရဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ငရဲခန်းတွေဟာ ဖုံးမရဖိမရ ပေါ်လာချိန်ပေါ့။
ကလင်တန်အစိုးရအဖွဲ့ဟာ ဘော့စ်နီးယားကိစ္စမှာ လုပ်ပေးစရာရှိတာတွေလုပ်ပေးပြီးပြီလို့ ယူဆထားကြတာပါ။
– ခရိုအတ်စစ်မျက်နှာကို အဆုံးသတ်ပေးပြီး မွစ်ဆလင်မ်+ခရိုအတ် မဟာမိတ်ဖွဲ့ပေးပြီးပြီ။
– သွေးတိုးစမ်းတဲ့ ဆာဘ်တွေကိုလဲ သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ တုန့်ပြန်ဖို့ လုပ်ထားတယ်။
– ဒုက္ခသည်တွေကိုလည်း လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပုံမှန်ပေး နေတယ်။
– ကျန်တာကတော့ ပြည်တွင်းစစ်မို့ နှစ်ဖက် ခြေကုန်လက်ပမ်းကျချိန် စောင့်ပြီး တို့အစိုးရက ညှိပေးလိုက်ရုံပဲ။
– ဂျင်နိုဆိုဒ်ငရဲခန်းတွေအတွက်ကတော့ စစ်ပြီးမှပဲ ခုံရုံးတင်အရေးယူဖို့ စဉ်းစားမယ်။ လောလောဆယ် ဒီစစ်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်လုံးကို ချိန်ခွင်ရှာညီအောင် ထိန်းပေးပြီး စစ်ပမ်းလာချိန်ကို စောင့်ရုံပဲ။ ဒါက ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကစလို့ ကလင်တန် အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ခံယူချက်ပါ။
ကလင်တန်အစိုးရဟာ ပြတ်ပြတ်သားသားဗုံးကြဲဖို့၊ US ခြေလျင်တပ် တွေလွှတ်ဖို့ လုံးဝ စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ကလင်တန်အစိုးရရဲ့ ဒီလုပ်ရပ်တွေကို ရေစုံမျှောလိုက်တဲ့လုပ်ရပ်လို့ ဝေဖန်လိုက်သူကတော့ အမတ်မင်းဘော့ပ်ဒိုးလ်ပါ။
ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ သီအိုရီသမားမဟုတ်တဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းစစ်သားဟောင်းတစ်ယောက်ပါ။ အစိုးရအဖွဲ့ကို လွှတ်တော်ထဲခေါ်ပြီး genocide ဟုတ်၊ မဟုတ်ချောင်ပိတ်တဲ့ သီအိုရီမေးခွန်းတွေအစား လက်တွေ့ကျတဲ့အလုပ်ကို ကောက်လုပ်ပစ်တာပါ။ သူလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်က ကလင်တန်အစိုးရအဖွဲ့ကို နောက်ကနေ တွန်းအားပေးတဲ့ပုံစံမကဘဲ ဖျင်ကနေဆောင့်ကန်လိုက်သလိုမျိုးပါ။
ဘော့ပ်ဒိုးလ်တင်လိုက်တဲ့ လမ်းကြောင်းက ဆာဘ်တွေအပေါ်မှာ လက်နက်ပိတ်ဆို့မှုကို ဆက်လက်ထားရှိပြီး ဘော့စ်နီးယားမွစ်ဆလင်မ်တွေကို လက်နက်ပိတ်ဆို့မှုအား ပယ်ဖျက်ရေးပါ။ ဒါဟာတဖက်သတ် လက်နက်ပိတ်ဆို့မှု ပယ်ဖျက်ရေးပါ။ ကလင်တန်အစိုးရကတော့ ဒီလို တဖက်သတ်ပယ်ဖျက်မှုကို အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ပါတယ်။ အကြောင်းရှိပါတယ်။ လက်နက်ပိတ်ဆို့မှုကို တဖတ်သတ် ပယ်ဖျက် ခြင်းဟာ UN resolution ကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ UN ရဲ့ လက်နက်ပိတ်ဆို့မှု resolution ကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးနေတာက US ရေတပ်ပါ။
UN resolution ရှိနေလို့သာ ဥရောပနိုင်ငံတွေဟာ သူတို့တပ်တွေကို UN တပ်သားတွေအဖြစ် ဘော့စ်နီးယားကို စေလွှတ်ထားတာပါ။ တကယ်လို့ UN resolution ကို US ကသာ ဆန့်ကျင်လာရင် ဘော့စ်နီးယားနိုင်ငံတွင်းက UN တပ်ဖွဲ့တွေ ထွက်ခွာသွားမှာပါ။ UN တပ်တွေထွက်ခွာရင် စစ်ဆုတ်ခွာမှုကိုကူညီဖို့ US ခြေလျင်တပ်တွေ စေလွှတ်ပေးပါ့မယ်လို့ ကလင်တန်က လူသိရှင်ကြား ကတိ ပေးထားတာလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီတော့ ဘော့ပ်ဒိုးလ် တင်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းက –
၂။ UN တပ်တွေထွက်ခွာ
၃။ US ခြေလျင်တပ်တွေဝင်
ဘော့စ်နီးယန်းတွေအတွက် လက်နက်ပိတ်ဆို့မှု တဖတ်သတ်ပယ် ဖျက်ရေးကို လွှတ်တော်ထဲမှာ စလုပ်နေတာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းကပါ။ ဒါပေမဲ့ ကလင်တန်အစိုးရက ဘော့စ်နီးယားကိစ္စသူတို့ ပွဲပြတ်အောင်လုပ်ပါ့မယ်လို့ ကတိ
ပေးတဲ့အတွက် ဘော့ပ်ဒိုးလ်တို့အုပ်စုဟာ နောက်ဆုတ်ပေးထားတာပါ။
၁၉၉၄ ခုနှစ် တလျှောက်လုံး ဆာဘ်တွေရဲ့ သွေးတိုးစမ်းမှုနဲ့ NATO ရဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ ဗုံးကြဲတုန့်ပြန်မှုတွေဟာ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ကို မချင့်မရဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ ၁၉၉၅ ဇန်နဝါရီမှာ လက်နက်ပိတ်ဆို့မှု တဖတ်
သတ်ပယ်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့ပြီး ၉၅ ဇူလိုင်မှာ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ဥပဒေကို အတည်ဖြစ်ရေး ၉၅ ဇန်နဝါရီကနေ ဇူလိုင်အထိ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ လှုပ်ရှားရမှာဖြစ်ပြီး ဒီဥပဒေ အတည်မဖြစ်ရေးအတွက် ကလင်တန်အစိုးရ ကလည်း အသည်းအသန်လိုက်ဖျက်ပါတယ်။
ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ စကားပြောကောင်းသူတယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ မိန့်ခွန်းတွေ လှလှပပပြောမယ့်အစား ဘော့စ်နီးယားက ငရဲခန်းမြင်ကွင်း တွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကို လွှတ်တော်ထဲမှာ ဖွင့်ပြလို့ presentation လုပ်ပါတယ်။ လက်တွေ့မြေပြင်မှာ ဖြစ်နေတာတွေကို မီးမှောင်းထိုးပြပြီး ထောက်ခံမှုရှာတဲ့သဘောပါ။ ကလင်တန်ကတော့ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဥပဒေကို သမ္မတဗီတိုနဲ့ ပယ်ချမယ်လို့ လေသံလွှင့်ထားတာကြောင့် ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ အမတ်တွေဆီက ၃ ပုံ ၂ ပုံသောမဲကို ပြတ်ပြတ်သားသားရရှိမှသာလျှင် ကလင်တန်ကို နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
စတင်စည်းရုံးခါစမှာ ဘောပ်ဒိုးလ်ဟာ အရှုံးဘက်ကပါ။ လွှတ်တော်ထဲက သူ့ဘော်ဒါတွေကတောင် “ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ စစ်တပ်ထဲ ဘီယာသွားရောင်း တောင် စွံအောင်ရောင်းနိုင်မယ့်သူမဟုတ်”လို့ ပြောယူရတဲ့အထိ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ စကားပြောရင် ဘုကျတဲ့သူပါ။ ဘော့စ်နီးယားက အနိဋ္ဌာရုံတွေကို အတုံးလိုက် အတစ်လိုက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုစည်းရုံးတဲ့ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ရဲ့နည်းဟာ အလုပ်ဖြစ်ပါ့မလား…? လူတွေ အထူးသဖြင့် လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ နှလုံးကို ကိုင်လှုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ အတော်စဉ်းစားရတဲ့ကိစ္စပါ။
အိမ်ဖြူတော်ကတော့ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ရဲ့ ဥပဒေဟာ အန္တရာယ်များလွန်းပြီးမီးနဲ့ကစားဖို့ပြင်နေကြောင်း နှက်ပါတယ်။ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ကို ကူညီတဲ့သူတွေလည်း ပေါ်လာပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့ ဘော့စ်နီးယားဂျင်နိုဆိုဒ်မှာ US အစိုးရရဲ့ပျော့ညံ့မှုကို ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ အလုပ်ထွက်ဆန္ဒပြထားတဲ့ နိုင်ငံခြားရေး အရာရှိတချို့ပါ။ ဒီအရာရှိတွေဟာ လွှတ်တော်ထဲက အမတ်တွေကို ချဉ်းကပ်ပြီး စည်းရုံးရေးဆင်းပေးသလို သာမန်အောက်ခြေလူတန်းစားတွေအထိဆင်းပြီး US ရဲ့ ကြားဝင်စွက်ဖက်မှုကို ထောက်ခံလာအောင် စည်းရုံးပေးကြသူတွေပါ။ သူတို့ ဒီလိုတွေ စည်းရုံးထိုးဖောက်နိုင်ဖို့ကူညီတဲ့သူကတော့ ဂျော့ဂ်ျဆိုးရော့စ်ပါ။ ဆိုးရော့စ်နဲ့ နိုင်ငံခြားရေးအရာရှိဟောင်းတွေဟာ ဘော်လ်ကန်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းပြီး ဒီစည်းရုံးရေးအလုပ်တွေကို အားစိုက်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်ထိ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ရဲ့ စည်းရုံးရေးဟာ ထင်သလောက် တိုးမပေါက်သေးပါဘူး။
၁၉၉၅ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက် နေ့မှာ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ လွှတ်တော်ထဲမှာ ပိုနေမြဲကျားနေမြဲနေခြင်းရဲ့ အန္တရာယ်ကြီးပုံ ကို မိန့်ခွန်းပြောပါတယ်။ အဲဒီညမှာပဲ ကလင်တန်ကလည်း ဘော့ပ်ဒိုးလ်အပါအဝင်အမတ်တွေကို အိမ်ဖြူတော်မှာ ညစာစားပွဲဖိတ်ပြီး ဘော့ပ်ဒိုးလ်ရဲ့ ဥပဒေဟာ အန္တရာယ်ကြီးကြောင်း စည်းရုံးရေးဆင်းပါသတဲ့။ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ကတော့ ကလင်တန်ရဲ့ ဖိတ်ကြားမှုကို လက်မခံလို့ ညစာစားပွဲကို မတက်ပါဘူး။ ကလင်တန်ရော ဘော့ပ်ဒိုးလ်ပါ နက်ဖြန် ၁၉၉၅ ဇူလိုင် ၁၁ မှာ ဆာဘ်တွေဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ မတွေးမိခဲ့ကြဘူးပဲ ဆိုပါတော့။ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်မှာတော့ ဆာဘ်တွေဟာ ဆရက်ဘရက်နီဆာကိုဝင်တိုက်ပြီး UN တပ်ဖွဲ့တွေကို ဓါးဆာခံ ဖမ်းဆီးကာ မွစ်ဆလင်မ်အရပ်သား ၁ သောင်းလောက်ကို သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆရက်ဘရက်နီဆာကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကလင်တန်နဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတို့ဟာ အင်းမလုပ် အဲမလုပ်နေပြလို့ ဟိုးလ်ဘရုခ်နဲ့ ဂါးဘရသ်တို့က တွန်းခဲ့ရပုံတွေကို ရှေ့မှာရေးထားခဲ့ပါပြီ။ US လွှတ်တော် အမတ်တွေအတွက် တော့ အခြေအနေအမှန်ကို ဖြုန်းခနဲတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက် ဘော့ပ်ဒိုးလ်နောက်မှာထောက်ခံတဲ့အမတ်တွေ တန်းစီသွားပါတယ်။ ဆရက်ဘရက်နီဆာကျဆုံးပြီး တစ်ပတ်လုံးလုံး ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ လက်နက်ပိတ်ဆို့မှု ပယ်ဖျက်ရေးကလွဲလို့ ကျန်တဲ့စကားကို မပြောတော့ပါဘူး။
ကလင်တန်အစိုးရဟာ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ရဲ့ ဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုလိုက်ရင်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ တောက်လျှောက်ဖြဲခြောက်လာတာပါ။ “အခု အဲဒီဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးဆိုတာ အခု ကျုပ်တို့မျက်စိရှေ့တင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ အခုချက်ချင်း လက်နက်တင်ပို့မှုကိုပယ်ဖျက်။ ဒါဟာဥပဒေပြု လွှတ်တော်တစ်ရပ် လုံးက ပြောတဲ့စကား” လို့ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြောလာပါတော့တယ်။
ကလင်တန်ဟာ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ကို ချော့ရပါတယ်။ ဇူလိုင် ၂၁ လန်ဒန် အစည်းအဝေးပြီးသည်အထိ လွှတ်တော်မှာမဲခွဲတာကို ဆိုင်းငံ့ထားဖို့ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ကို တောင်းဆိုပါတယ်။ ဘော့ပ်ဒိုးလ်က လက်ခံပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မီဒီယာတွေကတော့ ဆိုင်းငံ့မနေပါဘူး။
– ကလင်တန်အစိုးရဟာ သွေးမရှိတဲ့ အစိုးရ။
– ကလင်တန်ဟာ အာကျယ်ကောင်
– အိမ်ဖြူတော်က လူတွေ အရှက်ရောရှိကြသေးရဲ့လား။
– စူပါပါဝါ US ဟာ သူများနောက်မြီးဆွဲဖြစ်နေပြီလား။
– ဒီလို အိညှောင်ပတ်ညှောင် လုပ်နေပုံနဲ့ဆိုရင် NATO အဖွဲ့ရဲ့ လားရာကို ဆန်းစစ်ရတော့မယ်။
စသဖြင့် မီဒီယာတွေက တောက်လျှောက် နှက်နေတော့တာပါ။
ဇူလိုင် ၂၁ ပျော့တိပျော့ဖတ် လန်ဒန်ကြေငြာချက်အပြီး ဘော့ပ်ဒိုးလ်ဟာ မဲခွဲဖို့ပဲ စိုင်းပြင်းပါတော့တယ်။ ဇူလိုင် ၂၆ ကွန်ဂရက်မှာ မဲခွဲပြီး ထောက်ခံ ၆၉ မဲ ကန့်ကွက်၂၉ မဲနဲ့ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ရဲ့ ဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ သြဂုတ် ၁ မှာ အောက်လွှတ်တော်ကလည်း အတည်ပြုလိုက်ပြီ။ သမ္မတဗီတိုနဲ့ ပယ်ချလို့ မရသည်အထိ မဲအရေအတွက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြဇာတ်ရဲ့ အဆုံးသတ်ကကွက်ကို စတင်ဖို့ ကန့်လန့်ကာ ဆွဲတင်လိုက်ပါပြီ။
US သမ္မတလည်း တရားခံပဲ
ဆရက်ဘရက်နီဆာကျပြီးတဲ့နောက် US အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၂၇ ဖွဲ့ကလည်း ဆာဘ်တွေကို ဗုံးကြဲပစ်ဖို့ US အစိုးရဆီ လက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုကြပါတယ်။ ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာကတော့ ကလင်တန်ဟာ လေအိုးလို့ ရေးထည့်လိုက်ပါတယ်။ နျူးရီဗတ်လစ်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ရေးထားတာက “ဒီကမ္ဘာ ပေါ်မှာ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုကို တားဆီးနိုင်တာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပဲရှိတယ်။
US သမ္မတဟာ ဒီတာဝန်ကို ရှောင်လွှဲပြီး အမေရိကန်တွေအပေါ်မှာ အရှက်ရစေခဲ့ရင်သမ္မတကြီးလည်း ရာဇဝတ်ကောင်တွေနဲ့ အလိုတူအလိုပါ အပြစ်ရှိတယ်” တဲ့။ ကလင်တန်အတွက် အဆိုးဝါးဆုံးထိုးနှက်ခံရမှုကတော့ ပြင်သစ်သမ္မတက ဆရက်ဘရက်နီဆာကျဆုံးမှုကို မြူးနစ်ကိစ္စနဲ့ ယှဉ်ထိုးပြောဆိုတာပါ။ US ရဲ့ NATO အပေါ်ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍကိုပါ ပြင်သစ်ကသမ္မတရှီးရက်က မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာတော့ ကလင်တန်ဟာ ငြိမ်ခံနေလို့မရတော့ဘဲ “US ဟာ လက်ဝှေ့အထိုးကျင့်တဲ့သဲအိတ်ကြီး မဟုတ်ဘူး” လို့ ထွက်ပြောလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြောဟာ အပြောပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဆာဘ်တွေကိုလက်တွေ့ကျကျ ထိုးနှက်လိုက်တာကတော့ ခရိုအတ်နဲ့မွစ်ဆလင်မ်တပ်ပေါင်းစုပါ။ လက်နက်ခဲယမ်းတွေကို တောက်လျှောက်စုဆောင်းထားတဲ့ ခရိုအတ်စစ်တပ်ဟာ အင်အားအတော်ကို တောင့်တင်းနေပါပြီ။ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ပိုင်းကို ပေါင်မုန့်လှီးသလို လှီးဖဲ့ယူထားတဲ့ ဆာဘ်တွေကို ခရိုအတ်တွေက တန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်ပါတယ်။ ဆာဘ်တွေဟာမခုခံနိုင်တော့ပါဘူး။ ခရိုအတ်တွေဟာ ၁၉၉၁ တုန်းက ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့နယ်မြေတွေ အားလုံးကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီခရိုအတ်တွေရဲ့ ထိုးစစ်အတွင်းမှာ ထင်ရှားသွားတာက ဆာဘ်စစ်တပ်ဟာ လုံးဝကို အခွံသပ်သပ်သာကျန်တော့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။
ဆာဘ်တွေကို ဗုံးကြဲရတာ အရသာရှိလိုက်တာ
ဘော့စ်နီးယန်းမွစ်ဆလင်မ်တပ်မတော်ကလည်း ခြေသွက်လက်သွက်နဲ့ တန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေ လုပ်ပါတယ်။ ဆာဘ်တွေသိမ်းထားတဲ့ နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းက Bosanska, Krupa, Petrovac, Kljuc, Sanski စတဲ့မြို့တွေကို ဘော့စ်နီးယားမွစ်ဆလင်မ်တပ်မတော်က တဟုန်ထိုးပြန်သိမ်းပါတယ်။ ဆာဘ်တွေဘက်က လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ ၁၉၉၅ သြဂုတ် ၂၅ မှာ ဆာရာယေဗိုကို အမြောက်နဲ့ ပစ်ပြီး အရပ်သား ၃၇ ယောက်ကို သတ်ပစ် လိုက်ပြန်ပါတယ်။
US အနေနဲ့ ဘော့ပ်ဒိုးလ်ရဲ့ဥပဒေကြောင့် သူရဲ့ခြေလျင်တပ်တွေဝင်ကို ဝင်ရတော့မှာမို့ မဝင်ခင်မှာ လေကြောင်းကနေ လက်ဦးမှုယူပြီး အပြတ်အသတ် ဗုံးကြဲဖို့ အကြောင်းပြချက်ရှာနေတာပါ။ ပဲရစ်မှာရှိနေတဲ့ ဟိုးလ်ဘရုခ်က ဝါရှင်တန်ကို ဖုန်းခေါ်ပြီး ဗုံးကြဲဖို့ပြင်ပေတော့လို့ အကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာတော့ NATO လေယာဉ်အစင်း ၆၀ ဟာ လေထဲကို တပြိုင်နက်တည်းထိုးတက်သွားခဲ့ပြီး ဆာဘ်ပစ်မှတ်တွေကို ဗုံးကြဲချပါ တယ်။ ဒီတခါတော့ ဟိုတပြောက် ဒီတပြောက်မဟုတ်တော့ဘဲ ပစ်မှတ် ၆၀ လောက်ကို တပြိုင်နက် တိုက်ခိုက်တာပါ။ ဆာဘ်တွေရဲ့ ခဲယမ်းသိုလှောင်ရုံတွေ၊ ဆက်သွယ်ရေးအဆောက်အဦ တွေ၊ ရေဒါတွေ၊ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစခန်းတွေကို ပြားပြားဝပ်သွား အောင် ပစ်ခွင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို သမ္မတကလင်တန်ဆီ ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားတော့ “အေး… သိပ်ကောင်းတာပဲကွာ”လို့ ဝမ်းသာအားရ ပြန်ဖြေပါသတဲ့။
NATO လေယာဉ်တွေဟာ အကြိမ်ပေါင်း ၃၄၀၀ ပျံတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ဘော့စ်နီယန်း တပ်မတော်ဟာလည်း မြေပြင်ထိုးစစ်ကို အရှိန်မြှင့်ပါတယ်။ ၃ ပတ်အတွင်း ဆာဘ်တွေသိမ်းထားတဲ့ နယ်မြေရဲ့ ၂၀% ကို မွစ်ဆလင်မ်နဲ့ ခရိုအတ် တပ်တွေက ပြန်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ခရိုအတ်တွေကတော့ ၁၉၉၁ က ဆာဘ်တွေလုပ်ခဲ့တာကိုလက်စား ပြန်ချေတဲ့အနေနဲ့ ဆာဘ်ရွာတွေကို မီးတင်ရှို့ပြီး ဆာဘ်မြို့တွေကို အမြောက်နဲ့ ပြန်ပစ်ပါတယ်။ သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ဆာဘ်တွေဟာ ဗဟို ဆားဘီးယားနိုင်ငံထဲကို ပြေးဝင်ကြရပါတယ်။ “အပစ်အခတ် အမြန်ဆုံးရပ်စဲပေးပါ“ လို့ ဒီတခါ ငယ်သံပါအောင် အော်ဟစ်ရသူကတော့ မီလိုဆီဗစ်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။
ရာဇဝတ်ကောင် ဦးကျိုးနေတုန်း ဆွေးနွေးပွဲကို ဆွဲတင်ပြီးအနိုင်နဲ့ ပိုင်းလိုက်ပါတယ်။ မီလိုဆီဗစ်ဘက်က အောက်ကြေးနှိုက်လို့ရဦးမလားလို့ သွေးတိုးစမ်းပါသေးတယ်။ “US က ဆားဘီးယားအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ဆွေးနွေးပွဲမစတင်ခင် ရုပ်သိမ်းပေးပါ” လို့မီလိုဆီဗစ်ကတောင်းဆိုပါသတဲ့။ US ကတော့ နိုးပါတဲ့။ ဒါ့အပြင် မီလိုဆီဗစ်အနေနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတက်မလား၊ မတက်ဘူးလားမေးဖို့ လွှတ်လိုက်တဲ့သံအဖွဲ့ ဘဲလ်ဂရိတ်ကိုရောက်နေစဉ်မှာ US တိုက်လေယာဉ်အစင်း ၂၀၀ ဟာ ပြေးလမ်းပေါ်မှာ အသင့်နေရာယူထားပါတယ်။ မီလိုဆီဗစ် ခေါင်းခါတယ်လို့ ပြော
တာနဲ့ ဗုံးကြဲတာကို ထပ်အရှိန် မြှင့်ဖို့ပါ။ ဒါကြောင့် မီလိုဆီဗစ်အနေနဲ့ ဒေတန်ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ဖို့နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ မူဘောင်တွေကို သဘောတူလိုက် ရပါတယ်။
၁၉၉၅ ဒီဇင်ဘာမှာ ဒေတန်စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဆာဘ်ဂျင်နိုဆိုဒ်ယန္တယားဟာလည်း ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒေတန်စာချုပ်အရ ဘော့စ်နီးယားနိုင်ငံရဲ့ နယ်မြေ ၄၉ % ကို ဆာဘ် တွေကရရှိပြီး ကျန်တဲ့ ၅၁ % ကို မွစ်ဆလင်မ်နဲ့ ခရိုအတ်တွေက ရရှိပါတယ်။ ဆာဘ်ဖြစ်စေ ခရိုအတ်ဖြစ်စေ ဘော့စ်နီးယားနိုင်ငံကနေ ခွဲထွက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဆာဘ်တွေဟာနယ်မြေဟာ အကျယ်ဝန်ဆုံးရပေမယ့် မဟာဗျူဟာအရ ထက်ခြမ်းခွဲခံထားလိုက်ရပါတယ်။
ဒေတန်သဘောတူညီချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ NATO တပ်သား ၆ သောင်းကျော် ဘော့စ်နီးယားနိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်တပ်စွဲလိုက်ပါတယ်။ ဆာဘ်ဂျင်နိုဆိုဒ် ရာဇဝတ်ကောင်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ လူ ၂ သိန်းခွဲကျော် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ လူ ၂ သန်းကျော် အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ စစ်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဆာဘ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေဟာ ဆောင့်ကြွားဆောင့်ကြွားနဲ့ အရေးယူခံရမှုကနေလွတ်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ ရက်ခိုမလာဒစ်ဟာ NATO စစ်ဌာနချုပ်နဲ့ ၁၂ မိုင်ပဲဝေးတဲ့နေရာမှာ ဗြောင်နေထိုင်ပြီးတော့ လူသိ ရှင်ကြား အင်တာဗျူးတွေဘာတွေလုပ်ပြရင်း သူ့အပေါ်ထုတ်ဆင့်ထားတဲ့ ဖမ်းဝရမ်းကိုပမာမခန့် လုပ်ပြနေပါသေးတယ်။
ICTY ရုံးတော်ကတော့ မလာဒစ်ရဲ့မျက်ကွယ်မှာပဲ တရားစီရင်နေခဲ့ လိုက်တာ မလာဒစ်ဟာ ၂၀၁၁ ရောက်မှပဲ အဖမ်းခံရပါတော့သတဲ့။ (လက်ရှိ ICC ရုံးတော်ကတော့ ဒီအားနည်းချက်ကို သင်ခန်းစာယူပြီး တရားခံကိုအရင်ဖမ်းဆီးပြီး ရုံးတော်မှာ မျက်မှောက်ထား တရားစီရင်ရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။)
မီလိုဆီဗစ်ဟာလည်း ဆားဘီးယားနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိဆဲဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုကြောင့် ကြပ်တည်းလာတဲ့ ဆာဘ်ပြည်သူတွေဟာ မီလိုဆီဗစ်ကို ဆန့်ကျင်လာချိန်မှာတော့ မီလိုဆီဗစ်ဟာ ကိုဆိုဗိုမှာ ဂျင်နိုဆိုဒ်မီးကို အမြင့်ဆုံးအရှိန်ပြန်တင်ပြီး လူထုထောက်ခံမှု ပြန်ရှာပါတယ်။ ဘော့စ်နီးယားဟာ မီဒီယာမျက်နှာစာမှာ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ပါ။ ဘော့စ်နီးယားကိစ္စကို အနောက်နိုင်ငံတွေ ကိုင်တွယ်ပုံဟာ ဆာဘ် ဘက်က တစ်ခုခုလုပ်မှ နိုင်ငံတကာက တစ်ခုခုပြန်လုပ်တဲ့ titrated engagement နဲ့ သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘော့စ်နီးယားကိစ္စမှာ ဆာဘ်တွေဟာ ဖြစ်စဉ်တိုင်း ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာ လက်ဦးမှုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လူ ၂ သိန်းကျော်လည်းအသက်ပျောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကို သင်ခန်းစာယူလို့ Kosovo မှာတော့ titrated engagement နဲ့ မသွားတော့ဘဲ all-out engagement နဲ့ ကိုင်တွယ်ပါတယ်။ Genocide ကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ ပြတ်ပြတ်သားသား ခပ်သွက်သွက်ကိုင်တွယ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ကမ္ဘာက သင်ခန်းစာထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
I expectedawar. But , I did not expectagenocide.
“စစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ တွက်ဆခဲ့တယ်။ ဂျင်နိုဆိုဒ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ တော့ မတွက်ဆမိခဲ့ဘူး” ဒါဟာ ဘော့စ်နီးယားသမ္မတ အလီဂျာရဲ့ ပွဲအပြီး အင်တာဗျူးကစကားပါ။ သူရဲ့ တွက်ဆမှု အလွဲအတွက် လူ ၂ သိန်းကျော် အသက်ဆုံးရှုံးပြီး လူ နှစ်သန်းကျော် ဘဝပျက်ခဲ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ အလီဂျာ တစ်ယောက်တည်း လွဲတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကမ္ဘာလုံးဟာ အတွက်အဆတွေ လွဲခဲ့ကြပါတယ်။
“ဒါဟာဂျင်နိုဆိုဒ်ပါလား” ဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုကို မရရှိခဲ့မှုအတွက် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတွေရဲ့ မျက်စိရှေ့မှာတင် လူသား ၂ သိန်းအသက်ပျောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘော့စ်နီးယားဖြစ်စဉ်ကို ဒီလိုအတွက်အဆလွဲပြီး ပြည်တွင်းစစ်အဖြစ်ယူဆ ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့အတွက် ရာဇဝတ်ငရဲခန်းတွေဟာ လေးနှစ်ကျော်မျှ တည်ရှိခွင့်ရခဲ့ပြီးလူသားတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်၊ စာရိတ္တ၊ ဘဝ၊ ကျင့်ဝတ်တွေကို အတော် ဖျက်ဆီးခွင့် ရသွားခဲ့ပါတယ်။ ဂျင်နိုဆိုဒ်ကို ဂျင်နိုဆိုဒ်လို့မမြင်လို့ ဘော့စ်နီးယန်းတွေဟာ ၄ နှစ် လောက်ငရဲခံလိုက်ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ကို ဂျင်နိုဆိုဒ်လို့ မမြင်ဘဲ ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ ပဋိပက္ခအဖြစ် ယူဆကိုင်တွယ်နေလို့ နှစ် ၄၀ မက ငရဲတောထဲ မျောနေတဲ့ရာဇဝတ်ဘေးသင့် နိုင်ငံတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီတိုင်းပြည်ကတော့ လက်ရှိသင်နေထိုင်ရာ “ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါတစ်ခုကို ကုသရာမှာ အင်မတန်မှ အရေးကြီးတဲ့ အဆင့်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ diagnosis လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါအမည်မှန်ကို ရှာဖွေသတ် မှတ်ခြင်းပါပဲ။ ကုသမှုတွေ ဘယ်လောက်အဆင့်မြင့်မြင့် ဆေးဝါးတွေဘယ် လောက်စုံစုံ ရောဂါအမည်တပ်တာလွဲနေရင် ခဏတဖြုတ်သက်သာတာပဲရှိမယ်။ ရောဂါကတော့ မပျောက်ပါဘူး။
မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးရောဂါကို ကုသဖို့ကြိုးပမ်းနေတာ နှစ် ၆၀ ကျော်ခဲ့ပြီ။ မပျောက်နိုင်ပဲ ရောဂါတိုးသည်ထက်တိုးလာတာ diagnosis လွဲနေခဲ့ လို့ပါ။ အခုတော့ ရောဂါရဲ့ အမည်မှန်ကို သိခဲ့ရပါပြီ။ မြန်မာပြည်ဟာ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်ရောဂါဆိုး စွဲကပ်နေတာပါ။
ဒီ diagnosis ကို ဘယ်သူတွေကများ ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်…? နှစ်ရှည်ကြာချီ အစိုးရနဲ့ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း တွေကများလား….? No ! ပါ။ နှစ်ရှည်ကြာချီ အစိုးရကို အတိုက်အခံလုပ်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစု လို့သမုတ်ကြတဲ့သူတွေများလား…? No ! ပါ။ မထင်မှတ်ပဲ ဒီ diagnosis အမှန်ကို မြန်မာပြည်အတွက်ရှာဖွေ ပေးနိုင်ခဲ့သူကတော့ မြန်မာပြည်ထဲမှာ အဖိနှိပ်ခံရဆုံး၊ လူရာအသွင်းမခံရဆုံး၊ ဒုက္ခအရောက်ရဆုံးအုပ်စုဖြစ်တဲ့ မွစ်ဆလင်မ်တွေထဲက ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Genocide ဆိုတာ နာမည်လေးသပ်သပ်မဟုတ်ပါဘူး။ စကားလုံးလေးသပ်သပ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ မြန်မာပြည်တော်လှန်ရေးသမိုင်းမှာ breakthrough တစ်ခုပါ။
အင်မတန်မှ အရေးကြီးတဲ့ တော်လှန်ရေးဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုကြီးပါ။ Ok ! Genocide ဆိုတဲ့ Diagnosis ကိုတော့ရပြီ။ ဘယ်လိ်ုတွေကုကြမလဲ။ ဘယ်သူတွေက ကုကြမလဲ…? ဘော့စ်နီးယားမှာတော့ ဥရောပက UN တပ်သားတွေလွှတ်ပြီး အနာမရင်းအောင်ထိန်းပေးပါတယ်။ မရပါဘူး။ အနာဟာ ရင်းသည်ထက်ရင်းလာတာပါပဲ။ မွစ်ဆလင်မ်နိုင်ငံတွေကလည်း တန်ချိန်သောင်းချီတဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ ထောက်ပံ့ပြီး ဖြေရှင်းကြပါတယ်။ သွေးဆိပ်တက်မလာအောင် ထိန်းထားနိုင်ရုံပဲ တတ်နိုင် ပါတယ်။ အနာကတော့ ဆက်ရှိနေတုန်းပါပဲ။ဒီအနာကို အပြီးသတ်ပျောက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကတော့ အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုပဲရှိပါတယ်။ ဒါကို ဘော့စ်နီးယားမှာ သက်သေပြခဲ့သလို ကိုဆိုဗိုမှာလည်းသက်သေ အခိုင်အမာ ပြနိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီသက်သေတွေကို ဂျင်နိုဆိုဒ်ဥပဒေရဲ့ ဖခင် Dr.Raphael Lemkin က သူ မကွယ်လွန်ကတည်းက ကြိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်လဲ Dr.Lemkin ဟာ Genocide Convention ကို ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းရာမှာ ဆိုဗီယက်က ပြဋ္ဌာန်းတာတောင် တအားကြီးပျော်မပြခဲ့ပါဘူး။ ဆိုဗီယက်ဟာ စူပါပါဝါဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တည်ဆောက်ပုံဟာ ဂျင်နိုဆိုဒ်
ရာဇဝတ်မှုကိုကိုင်တွယ်ဖို့ အသင့်ရှိမနေပါဘူး။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ လွှတ်တော်၊ အစိုးရ၊ မီဒီယာ၊ တရားရုံး စတဲ့ နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်ပုံကသာလျှင် ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုကို တိုက်ဖျက်ဖို့ သင့်လျော်တာပါ။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်ဟာ ပထမကမ္ဘာစစ်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့ စစ်အေးတိုက်ပွဲဆိုတဲ့ ပွဲစဉ်တိုင်းမှာ အဓိကအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ တစ်ခုတည်းသော စူပါပါဝါနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် ရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ပြီးရင် ကုသဖို့အတွက်ကတော့ Washingtonology=အမေရိကန်အိမ်ဖြူတော်နိုင်ငံရေးကို နားလည်ဖို့နဲ့ ထိုးဖောက်လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့က ထပ်တူအရေးကြီးပြန်ပါတယ်။ အလီဂျာ ကတော့ ဒါကိုနားလည်သလို သူဟာ အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့အတွက် ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်က ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုအတွက် ဝါရှင်တန်မှာထိထိရောက်ရောက် ထိုးဖောက်ပေးတဲ့သူကတော့ သိပ်အများကြီးမရှိလှပါဘူး။ အဲ ! မထိုးဖောက်တဲ့ အပြင်ပိတ်ဆို့တဲ့သူက အများသားဗျ…။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ပဲပိတ်ဆို့ပိတ်ဆို့ တော်လှန်ရေးဟာ ရှေ့ဆက်တိုးလာခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော် ဘော့စ်နီးယားဂျင်နိုဆိုဒ်ကို ရေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ့်လူတွေကို parallel thinking ရစေဖို့ပါ။ ကိုယ်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲ ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီ ဘယ်လိုထိုးဖောက်နိုင်ပြီး ဘယ်လောက်အောင်မြင်နေပြီဆိုတာကို နှိုင်းယှဉ်တွေးမိစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာတွေကို ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလိုခံစားဖတ်ရှုရုံတင်မကဘဲ ကိုယ့်ဖာသာဆက်လက်တိုးချဲ့ဖတ်ရှုကြရင်းနဲ့ တော်လှန်ရေးမှာ တတ်နိုင် သည့်နေရာကနေ ထောက်ခံပါဝင်ပေးဖို့ပါ။မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုကိုင်တွယ်ရာမှာ ဘယ်အဖွဲ့က အဓိကနေရာက ပါဝင်သလဲ…? ဘယ်သူက ICC ကို အာမခံနိုင်သလဲ…? ဘာ့ကြောင့်ဒီလူဟာ ဒီလိုအာမခံနိုင်သလဲ…? ဒီလူကို ကိုယ်တို့ ဘယ်လိုအားပေးနိုင်မလဲ…? စသဖြင့်သိဖို့က ကိုယ်တိုင်လဲ နောက်ခံအသိရှိမှရမှာပါ။ ဒီ နောက်ခံအသိလေးအတွက် ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှ ဖြည့်ဆည်းပေး ခြင်းမျှသာပါ။
Nextရိုဟင်ဂျာအရေး ICC တင်ဖို့ မှတ်တမ်း ပြုစုနေ
ဘယ်လိုလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဂျင်နိုဆိုဒ်ဖြစ်သလဲ ?
Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin (စ/ဆုံး)